Date: 3 Aug 2013Author: Bashiir M. Xersi 0 Comments
Waa kuma masuulkaa? Yaa kale, waaGudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho, mudane: Maxamuud Axmed Nuur “Tarzan”, oo siyaasadda ku soo galay laba daaqadleeyda diinta iyo qabiilka is huwan, oo aan hore loogu aqoon siyaasad iyo dhaqdhaaq la xiriira arrimaha bulshada, haddana, waaba xubin ku sigan inuu noqdoMAHDI!
Hubaal in arrintaasi u baahnayd qof isu taaga, oo ka soo dhalaalaa u dhaqdhaqaaqidda umadda dhibaataysan, su’aashuse waxay ka taagan tahay, maanta Mudane Tarzan waaGudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho, haddaba muxuu ka yiri soo galitaanka Kenyaanka iyo Xabashida waddanka ay soo galeen dhawr bilood ka hor? Siduu shalay mudaaharaadyada u horkacayey maanta ma u horkacayaa? Mise wuxuu noqday sidii C/laahi Sheekh Xasan? Qormo mawduucan ku saabsan halkan ka fiirso:
Marar badan oo uu hadlay ayuu eedda dusha uga tuuray Alshabaab, isagoo iska indha tiraya ciidamada AMISOM, oo dharaar walba xasuuqaShacabka Muqdisho, waana arrin aan rabo inaan bannaanka soo dhigo, maadaama aysan dad badan ku baraarugsanayn. Run ahaan Xabashi, Ugandhis iyo Kenyan inaysan kala duwanayn, markay arrintu marayso laynta umadda iyo burburinta hantideeda, ila xasuusta sida joogtada ah ee Xabashidu u duqayn jirtay Suuqa Bakaaraha iyo sida ay AMISOM u duqeeyaan, haddaa maxay ku kala duwan yihiin? Teeda kale, haddii Alshaab ku disho iyo hadday AMISOM ama Xabash ku dilaan, maxay kuugu kala duwan? Dil waa dil.
Qodobkaasi waa hoggaanka magaalada, maxaa yeelay, had iyo jeer sida hoggaanku u wanaagsan yahay ama u xun yahay ayaa loo dib dhacaa ama loo hormaraa. Aan jalleeco dhanka kale, ee aan marna ka ahmiyad yarayn hoggaanka. Waxaanba dhihi karaa, waa midka dadka dhami wada arki karaan, ee ay xukun iyo xus ku sheegi karaan. Maadaama ay tahayilqabato iyo marag ma doonto. Waana ammaankee, maxaa ka qabsoomay? Saw qaraxyadii dib uguma soo billaaban? Yaa u sabab ah, ma Odoyaasha mise madaxda uu Tarzan ku jiro?.
Previous Previous post: DHALLINYARADA maxaa ka hor taagan NABADDA?!